ရပ်ရွာစီမံခန့်ခွဲမှုမှန်ကန် Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 29, 2013 သောကြာနေ့, သြဂုတ်လ 30, 2013 Kelsey ကော့
၄ င်းတို့၏အခန်းကဏ္ industry သည်လုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းရပ်ရွာမန်နေဂျာများသည်များသောအားဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်ပရိသတ်တိုးတက်မှုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည်။ သင်၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ပထမ ဦး ဆုံးအစဉ်လိုက်, သူတို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုအာရုံစိုက်ထားသည်မှာအမှတ်တံဆိပ်အသိုင်းအဝိုင်းပရိသတ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ မလွှဲမရှောင်သောလမ်းသံများကိုအနိုင်ယူရန်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အမြင်ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။
ပို့စ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ခွဲခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များကိုစီစဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်စေအသိုင်းအဝိုင်းမန်နေဂျာများသည်ဖောက်သည်များအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြားအဆုံးစွန်သောပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချက်အနေဖြင့်၎င်းတို့အားထောက်ခံသူများကိုချန်ပီယံဖြစ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အွန်လိုင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့်အတန်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအထူးသီးသန့်ရယူခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းတို့သည်ရပ်ရွာလူထုအကြားပconflictsိပက္ခများနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းများကိုဖော်ထုတ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြေရှင်းခြင်း၊ သင်၏ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမှအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ထိုရဲရင့်သောရည်မှန်းချက်များကိုသူတို့ဘယ်လိုအောင်မြင်ခဲ့သလဲ။ အဆိုအရ ကျေနပ်မှုကိုရယူပါစည်းလုံးညီညွတ်သည့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုထားခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးစနစ်တကျတပ်ဆင်ထားသူများအတွက်သေချာပေါက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးပါ ရပ်ရွာမန်နေဂျာအရင်းအမြစ်နှင့်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းပြ:
Tags: တံခွန်စိုက်သူအသိုင်းအဝိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအသိုင်းအဝိုင်းမန်နေဂျာဧည့်ဝန်ဆောင်မှုinfographicက trolls
သြဂုတ် 30, 2013 မှာ 2: 49 AM
Kelsey ?? မင်းရဲ့ tweet လိပ်စာကဘာလဲ ??